सुनसरीका कृषकहरु ब्यवसायिक बन्दै -
सुनसरीका कृषकहरु ब्यवसायिक बन्दै
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ०८, २०७५ समय: १३:१४:०२
झुम्का,चैत्र ८ । सुनसरीका उत्पादकहरुको आर्थिक शसक्तिकरणकालागी ग्रामिण समाज केन्द्र उत्थान सुनसरी(आरएसडिसि)ले गरेको सहयोगबाट सुनसरीका कृषकहरु ब्यवसायिक बन्दै गएको छ । ग्रामिण क्षेत्रका कृषकहरु निर्वाह मुखि खेती गर्दै आएकोमा वल्र्ड भिजनको कृषि सामाग्री सहयोग र (आरएसडिसि)को सहजीकरणबाट तरकारी खेति गर्दै आर्थिक उपार्जन गर्न थालेका छन् ।
संस्थाले संचालन गरेको आफनो परियोजना अन्तर्गत रहेको क्षेत्रमा सुक्रवार गरेको अनुगमनबाट बिशेषगरी महिलाहरु कृषि उत्पादनमा उलेख्य उपलब्धि पाईरहेको निशकर्षमा लिएको छ । कृषक समुहमा गरेको सहयोगको अनुगमनमा गढि गाउँपालिका वडा नं. १ मधैलीका महिलाहरु तरकारी खेतिमा ब्यवसायिक बन्दै गएका हुन् । उज्जवल कृषक समुह गठनगरी सामुहिक रुपमा तरकारी खेति गर्दै आएकोमा संस्थाले कृषि सामाग्रीमा पानि तान्ने पम्पसिट,तालिम,उन्नत जातका बिउ सहयोग गरेका थिए । सो सहयोगले उनीहरु तरकारी खेतिबाट उत्पादन गर्दै बजार सम्म पुर्याएर बिक्रि बितरणले आम्दानि गर्दै अएको समितिका अध्यक्ष मनकुमारी चौधरीले बताईन् । समुहले हालमा क्राका,भाण्टा,बोरी,खुर्सानि,टमाटर उत्पादनकालागी राखेका छन्. । यस समुहका कृषकहरुले ढुुवानिकालागी सवारी साधन सहयोग हुन सके झनै लाभान्वित हुने बताए ।
त्यसैगरी ईटहरी ११ अमझोकीमा बाढि पिडित कृषकलाई सहयोग गरेका छन् । सहयोगले उनीहरु प्रगतीशिल कृषक समुह गठनगरी पुरानो रैथाने जातका बिउ संरक्षण गर्दै आएका छन् । बाढिले सबै बिउ नष्ट गरेपछि कृषि प्रोत्साहनकालागी कृषक समुह बनाई संस्थाले सहयोग गरेका हुन । बिउ संरक्षणकालागी ग्रेडिङ्ग मेसिन,र्याक लगायत बिउ संरक्षण सामाग्री प्रदान गरेका छन् । उनीहरु बिउ संरक्षण लगायत ब्यवसायीक खेति निरनतरता दिदै मनग्ये आम्दानि लिई रहेका छन् ।
ईनरुवा ७ चाँदवेला डोरामा कृषि बजारकालागी दुई टहरा निर्माण गरेको छ । टहराबाट स्थानिय कृषकहरु उत्पादन गरेका बस्तु बिक्रि बितरणमा लाभ लिदै आएका छन् । त्यसैगरी कृषि उत्पादनकै प्रवद्र्धनकालागी मधैलीमा टहरा निर्माण समेत गरेका छन् ।
स्थानिय सरकार,कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरी,पत्रकार र वल्र्डभिजन तथा आरएसडिसिका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त अनुगमनले कृषकहरुमा उत्साह,निर्वाह मुखिबाट ब्यवसायमुखि बनेको,महिलाहरु आत्मनिर्भरताका साथै राष्ट्रलाई आर्थिकसवलमा टेवा पुर्याउर्र्दै गरेकोले सवलपक्ष रहेको बताए । परियोजनामा निरन्तर प्रभावकारीकालागी संस्थाबाट समय समयमा अनुगमन गर्नु पर्ने जनाए । बिउ संरक्षण कर्ताले पौरानिक रैथाने जातका बिउहरु संरक्षण गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए । कृषि टहरमा उचित प्रयोग हुनु पर्ने समेत सुझाव दिएका छन् । समग्ररुपमा परियोजना उपलब्धि मुलक पाईएको निशकर्ष निकालेका छन् । स्थानिय तहका कृषिकहरुलाई सहयोग गरेकोमा स्थानियसरकारका प्रमुखहरुले धन्यवाद समेत दिएका छन् ।
अनुगमनमा कृषि ज्ञान केन्द्र ईनरुवा सुनसरीका प्रमुख बौवालाल चौधरी,रामधुनी नगरप्रमुख जयप्रकाश चौधरी,गढिगाउपालिका अध्यक्ष,श्रीप्रसाद यादव,वल्र्डभिजनका उमेश थापा,पत्रकार तथा सहयोगी संस्थाका प्रतिनिधिहरु अनुगमनमा सहभागी हुदै थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहित कृषकहरुलाई उत्साह प्रदान गरेका छन् ।